mi - mShopရှာဖွေသည်
Redmi Note 4X(Ram4Rom 64) Stable Gold Ram 4GB, Rom 64GB, CPU - Octa-Core Max 2.0GHz
Redmi Note 5A Gold Screen 5.5inches, CPU Quad-Core Max 1.40 GHz
Redmi Note 4X (Ram 3, Rom 32)Stable Gold Ram3Rom 32, Camera 13MP & 8MP CPU Octa-Core Max 2.0GHz
Xiaomi Mi Max2Gold Ram 4, Rom 64 GB ဖြစ်လို့ အရမ်းပေါ့ပါးသွက်လပ်စွာသုံးနိုင်ပြီး battery လဲကြာရှည်ခံပါတယ်
Redmi 4A Global Gold2GB Ram, 16 Rom. 13 MP camera
Redmi5(3GB , 32GB) Gold Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53, Qualcomm Snapdragon 450
Xiaomi 5X Black Ram 4GB Rom 64GB, Andriod Version 7.0
I Phone X (256GB) Gray Sensors Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
I Phone X(64GB) Gray Sensors Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer
Laptop Mirror Good Price....
Bromidosis ချိုင်းချွေးနံ့ပျောက်ဆေးရည် အပြင်သွားလို့ချိုင်းချွေးနံ့ထွက်ပြီးအနံ့ဆိုးများထွက်မှာမပူနဲ့တော့နော်
Redmi Note 4X (Ram 4, Rom 64)Global Gold Ram3Rom 32, Camera 13MP & 8MP CPU Octa-Core Max 2.0GHz
Redmi Note 4X (Ram 3, Rom 16)Global Gold Ram3Rom 32, Camera 13MP & 8MP CPU Octa-Core Max 2.0GHz
Redmi Note 4X (Ram 3, Rom 32)Global Gold Ram3Rom 32, Camera 13MP & 8MP CPU Octa-Core Max 2.0GHz
Xiaomi Mi 5S Gold Ram3Rom 64
Anti fog Swimming Glasses ရေကူးမျက်မှန် သင့်ရဲ့တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ မျက်လုံးကို ကာကွယ်ဖို့ ။
Remax Mirror Power Bank (5500 mah) အကြမ်းခံပစ္စ​ည်းကောင်း
Xiaomi 5(32GB, 3GB) Gold Quality ကောင်းမွန်မှုကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ စိတ်ပူပန်စရာမလိုပဲ အသုံးပြုနိင်ပါသည်။
Hello Premium 1 Gold Ram 1 GB, Rom 8 , Camera 8MP and5MP,
Redmi note2White 4G network,2GB Ram, 16Rom
mini massager (နှိပ်စက်) ကိုကိုတို့မမတို့ ရေအလုပ်တွေပင်ပန်းလို့ ညောင်းညာနေလားနှိပ်တဲ့စက်လေးရှိတယ်နော်လူကြီးတွေအတွက်လဲအဆင်ပြေတယ်ကိုညောင်းညာနေတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးယုံပါပဲ
Xiaomi Redmi Note4(4G) Dual SIM Gold All Network, Ram 3, Rom 64,
Microphone Stand အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး၊ အလွယ်တကူခေါက်ယူသိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။
Tedmimak(03) ဒီတစ်ခါသားသားလေးတွေအတွက်နော် အင်္ကျီကလက်ရှည်လေးဖြစ်တော့ခြင်ကိုက်မှာ စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးနော်
Tedmimak(02) မီးမီးလေးတွေမိုးတွင်းခြင်ကိုက်မှာစိုးရိမ်စရာမလိုတော့ဘူးနော် ၀မ်းဆက်လေးတွေရှိတယ်နော် ဈေးလဲသက်သာတယ်နော်
Meizu M 5s M5s is the result of laser assisted, aluminum alloy construction.
Tedmimak(01) မေမေ တို့ ရေ မီးမီးတို့ အတွက်ညအိပ်ဝတ် အင်္ကျီလေးတွေရှိနေပြီနော် ၀မ်းဆက်ဆိုတော့မီးမီးလေးတွေအတွက်အဆင်ပြေပြီနော်
LG 20 Liter Microwave Oven Digial Display System ပါဝင်ပြီး I Wave System ကြောင့်နေရာမျှတစွာနဲ့လျင်မြန်စွာကျတ်နိုင်ပါတယ်
Xiaomi Mi 5s 4GB/128GB Dual SIM Gold Gold အရမ်းသုံးလို့ကောင်းတဲ့ ဖုန်းလေးမို့ တင်လို့ပီဗျာ
Xiaomi Mi 5s 4GB/128GB Dual SIM Gray & Sliver Gray ဖုန်းဈေးတွေအရမ်းကျနေလို့ တင်ပေးလိုက်ပီနော်
Xiaomi Mi 4S 3GB/64GB Dual SIM Gold Gold အရောင်လေး အရမ်းလှလွန်းလို့ တင်လိုက်ပီ ဘော်ဘော်တို့ရေ